About Papernerds.de | Nheyo & Chokwadi | Papernerds
Ikozvino nyowani: Kukurukurirana kwevanyori mushure mekuisa odha. Chinangwa: rakanakisa mhando! Iyo sevhisi inoshanda kubva kune yepakati mhando nhanho.
mitengo Madhipatimendi Wongororo About isu
mitengo Raira izvozvi! Madhipatimendi Wongororo About isu
Isu tiri vekutanga!
Pano iwe unogona kuwana vashandi vePapernerds.
Mutengi uye munyori vanoramba vasingazivikanwe zvachose!
Batsirwa kubva pamakore edu ezviitiko mukunyora kwekudzidza
Zvakanaka kuzivana nemi
Kambani yePapernerds yakavambwa muna2000 uye ndeimwe yemapurojekiti ekutanga epamba mumunda wemapepa evadzidzi. Panguva ino isu takabatsira zviuru zvevatengi kuti vapase zvakakwana makosi, mapepa etemu, zvichemo uye mapepa ekuongorora uye kuwana dhigirii repamusoro nedzidziso yetenzi, diploma thesis kana chiremba chiremba. Iyo kambani inzvimbo yepamutemo yakanyoreswa zviri pamutemo uye inoona nezve mhando yemasevhisi ayo sezvakatarwa mumutemo weGerman.
Kuvanzika uye Kuvimbika
Chibvumirano chepamutemo kuburikidza neyedu kupa. Yakasimba mirayiridzo yekuchengetedza dhata. Kuteerera garandi yekudzoserwa mari. Nzwisisika vatengi rutsigiro.
Hunhu uye nenguva
Kunyatsoteerera kune yakatarwa nguva yakatarwa nemutengi. Kuwedzera cheki chebasa nebasa redu rekudzora kwe: fomati, kubiridzira (nemapurogiramu akati wandei esoftware), chiperengo, girama, mamaki ekupinza uye zvemukati.
Sevhisi uye nyaradzo
Yemaneja maneja kune wega mutengi. Tsigiro pane dzese nzira dzekutaurirana. Akaunganidza dhisikaundi sisitimu, kukwidziridzwa uye maraffles evatengi vedu.
Hunhu uye nenguva. Kuteerana neyakafa nguva yakatarwa nemutengi. Kuwedzera ongororo yebasa nehunhu kudzora kwe: zvemukati, fomu uye basa rebasa. Plagiarism chengetedza nemapurogiramu akati wandei esoftware.
Sevhisi uye nyaradzo. Yemaneja maneja kune wega mutengi. Tsigiro pane dzese nzira dzekutaurirana. Yakaunganidzwa dhisikaundi system, kukwidziridzwa uye maraffles evatengi.
Chikwata chedu chine vechidiki, vanofara vanhu vanoonga zvigadzirwa, rusununguko rwemukati, kuseka, mhedzisiro yebasa uye pfungwa yenharaunda muchikwata
Vatungamiri vedu vane makore akawanda ehupenyu mukutsigira mapepa evadzidzi kubva panguva yekuraira kusvika pakuendeswa. Iko kuenderera kwehunyanzvi kudzidziswa kwevanyori vedu kunovimbisa yemhando yepamusoro uye kugutsikana kwevatengi.
Nyanzvi dzedu dzinobata mabasa pane ese misoro uye madhiri. Vashandi vanobatanidzwa mukugadzirwa kwakananga kwemabasa anosanganisira evadzidzisi chete, vadzidzi vezvechiremba, masters uye diploma vakapedza kudzidza - kazhinji vanyori vakazvisimbisa sevashandi padanho repamusoro.
Zvakanaka kusangana newe - tinofara kukutsigira!
Chokwadi chinonakidza nezvedu
Avhareji zera revashandi
Mikombe yekofi inodyiwa nevashandi vhiki rega rega
yevashandi vanouya kuzoshanda nebhasikoro
Parizvino gore rino vatengi vedu vakagamuchira zvipo
Tinopa zvirimwa zvedu zita
Chinonyanya kufarirwa mimhanzi
Ungade here kudzidza zvakawanda nezve ghostwriting?
Tsvaga zvimwe pano!
Nhamba yevadzidzi nhamba 1 kuGerman
Nyora kune yedu vatengi:
Zvese zvine chekuita nekunyora ghostwriting
© 2000 - 2021, Papernerds.de. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Ikozvino nyowani nyowani: Mushure mekunge odha yaiswa uye data reodha rave kuwanikwa, hurukuro nemunyori wako uye mumwe wevatinoshanda navo ichaitika nechinangwa chekukwanisa kukupa hunhu hwakanaka. Iyi sevhisi inosanganisirwa mumutengo peji rega remahara kubva padanho rehunhu hwepakati.
Kumbira 2% dhisikaundi!
Iwe unozowana ruzivo pamusoro pemvumo inosanganisira kuyerwa kwekubudirira, iko kushandiswa kweanotumira sevhisi MailChimp, Mailerlite, kutemerwa kunyoreswa uye kodzero dzako dzekudzoserwa mukuzivisa kwedu kwekuchengetedzwa kwedata.